Baarayaasha Maskaxda: “Daawashada Filimada Xun (porn) Waxay Xannibayaan Horumarka Maskaxda” | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — March 27, 2020
Baarayaasha Maskaxda: “Daawashada Filimada Xun (porn) Waxay Xannibaan Horumarka Maskaxda” Saynisyahannada maskaxda ayaa rumeysan in porn-gu burburiyo qaybta maskaxda ee maamusha murugada, kartida, iyo xakameynta.
Rachel Anne Barr oo ka tirsan jaamacadda Laval ee dalka Kanada ayaa daabacay warbixin cilmi baaris ah oo muujineysa in isticmaalka joogtada ah ee dumarka iyo ragga qaawan uu waxyeelleeyo qeybta maskaxda ee loo yaqaan ‘prefrontal cortex’ oo xakameysa niyadda, awood u yeelashada iyo xakameynta.
Waa maxay prefrontal cortex?
The prefrontal cortex (PFC) wuxuu ku yaalaa dhinaca hore ee maskaxda, wejiga gadaashiisa. Waxay mas’uul ka tahay fikirka iyo falanqaynta fikirka, wuxuu sidoo kale mas’uul ka yahay haggaajinta dhaqanka.
Aqoon yahaankaan wuxuu aaminsan yahay in nolosha galmada ee dadka iyo caafimaadka dhimirka ay leeyihiin cawaaqib xumo ka yimaada galmada:
– Murugada ilaa jahwareerka; qaawan ayaa u muuqda inuu curyaaminayo shabakadaha neerfaha.
Rachel Anne Barr, oo cilmi baaris ku sameeya meelaha wax lagu barto iyo xusuusta, wuxuu rumeysan yahay in cirbadda dopamine ee maskaxda ay ka hesho porn-ka inay keento jiirka iyo luqadaha – halkii ay ka ahaan lahaayeen bani’aadam dhabta ah – inay xiriir la yeeshaan qanacsanaanta galmada. Niyad jab, jahwareer iyo hubanti la’aan ayaa noqon kara cawaaqib xumo ba’an ” waa silsiladda irbadda dopamine”.
Pornography-ga waxaa lagu eedeeyey in si ula kac ah loogu adeegsaday waxyeelaynta ujeeddooyinka dadka Yuhuudda u ololeeya.
Kanaalka telefishanka ee ay leedahay Qatar Al-Jazeera ayaa soo gudbiyay muuqaal sheegaya in Yuhuuddu ay maamulaan warshadaha galmada (porn industry) oo ay u adeegsadaan “musuqmaasuqa dadka” sababtoo ah waxay “neceb yihiin Masiixiga.”
Sida laga soo xigtay tarjumaad uu sameeyay MEMRI, qoraha filimka ku duuban Midan Voice wuxuu sheegayaa in Israel ay ku qasabtay ka saarista goobaha internetka falalka taranka ah ee ka dhaca dalka, kaasoo “keenaya su’aal sharci ah, maxaa yeelay waxaa ku jira iska hor imaad yaab leh: Sidee bay Yuhuuddu ugu mamnuuceen muuqaalada xun xun gudaha waddankooda, halka ayaguna ay maalgashi ugu sameeyaan muuqaalada galmada ah?”
“Yuhuuddu waxay xukumaan badankood [warshadaha porn-ka], haddii aysan dhammaantood ahayn,” qoraaga ayaa sidaasi yiri. Waxay xittaa raacisay majaladda caanka ah ee “Playboy”, oo la aasaasay bartamihii 1950-meeyadii, waxaa iska cad in gebi ahaanba majaladaasi ay maamulaan Yuhuudda, ”ayay raacisay.
Playboy waxaa markii ugu horreysay lahaan jiray oo maamuli jiray nin aan Yuhuud aheyn Hugh Hefner ka dibna gabadhiisa, oo sidoo kale aan aheyn Yahuud.
“Most of the male porn actors in the 1970s and 1980s were Jews. The most famous of those actors – the most renowned port actor of all – is the American Jew Ron Jeremy, who is known as the ‘porn legend.’
Sida taariikhda sheegayso, inta badan ragga jilayaasha filimmada galmada ee 1970-yadii iyo 1980-yadiiba waxay ahaayeen Yuhuud. Kuwa ugu caansan jilayaashaas – waa Yuhuudi Mareykan ah Ron Jeremy, oo loo yaqaan ‘halyeeyga porn-ka’.
Dawaashada filimada galmada ah waa sida sixirka oo kale, haddii aad mar barato waxaad dareemaysaa inaad u baahan tahay mararkale inaad hadana daawato, maxaa yeelay maskaxdaada ayaa la qabsanayso, adigana waxaad ku jirtaa heyndaab qarsoon.
Qodobadaan hoose waa toddobo calaamadood oo digniin ah, waxayna caddeynaysaa inaad dhibbane u tahay daawashada filimada galmada ah.
Haddii aad daawato filimada galmada ah si aad dhiirogelin galmo u hesho ama aad u baahato dhiirrigelinta noocaas ah si aad uhesho qancin galmo, waxaad ku jirtaa dhibaato oo waxaa la joogaa wakhtigii aad joojin lahayd oo aad nasan lahayd.
Haddii waxyaabaha kale ee muhiimka ahi aysan ku qanacsanayn naftaada illaa aad daawato filimada xun mooyee, waxaa la joogaa waqtigii aad naftaada la yeelan lahayd wadahadal furan oo ku saabsan sida aayaha naftaada ee ku aadan qofka nolosha kula qeybsanaayo ama kula qeybsado.
Hadaad dareento inaad ubaahantahay inaad quusato ama aad qarsato adeegsigaaga galmada oo aad dareento wax dambi ah ama ceeb ah, waa waqtigii aad ubaahnaan laheyd caawinaad si aad u go’aamiso waxa dhulka hoostiisa maraya, waxaadna weheshataa salaada, iyo soonka.
Haddii aad bilawdid inaad daawatid porn-ka gaar ahaan meelaha aan ku habboonayn ama waqtiyada aan habboonayn, ma sii jiri doontid, sidoo kale xakameynta hab-dhaqankaaga ayaa sii xumaan doona. Laakiin hadda adiga ayaa gacanta ku haya ee is xakamey.
Haddii nooca filimada galmada ah ee aad daawanaysid uu ku badan yahay falalka rabshadaha iyo sharaf-xumada ah, waxaad halis ugu jirtaa in lagu niyad-jabiyo oo aad aamminsan tahay in dabeecadahaani yihiin caadi. Waxaana macquul ah inaad noqoto qof rabshadaha u arko wax iska caadi ah, marka waxaad maanta haysataa fursadii aad ku joojin lahayd.
Haddii aad u istcimaaleyso daawashada filimada galmada ah si aad iskugu daaweyso isku buuqa, walaaca ama kalinimada, sidaasi wey kasii xumaan doontaa natiijada. Porn-ka ayaa si ku-meel-gaar ah u yareyn kara xanuunka dhimirkaaga, laakiin wuxuu kaliya uga sii dari karaa dhibaatooyinkaaga mustaqbalka fog. Sida haddii aad arday tahay oo aad tagto goob waxbarasho, waxbarashadana ay tahay mustaqbalkaaga waxaa laga yabaa inaad macalinkaaga u aragto qof adiga ku xaasidaayo, ama aad dareento in dulqaadka kugu yaryahay, ugu dambeyntiina waxaa laga yabaa dhibaatada maskaxda ah ee kaaga soo gaaray daawashada filimada galmada ay kugu keeni karto mustaqbal xumo ama mugdi leh.
Guud ahaan, daawashada filimada galmada wuxuu noqonayaa qof maskaxdiisa oo dhan xumaan ka buuxsamayso, si daran ayuu uga fogaanayaa diinta, sidoo kale wuxuu noqonayaa qof aan ku qancin xaaskiisa marka uu guursado, sidoo kale kacsiga ayaa ka tagayo marka uu barto daawashada filimada galmada ama dumarka qaawan.
Wuxuu sidoo kale qofka noqonayaa qof sinada ay u fududahay cabsida sinada ayaa ka tagayso qalbigiisa, wuxuu kaloo galayaa siigo iyo fikir xun oo maanta oo dhan uu ka fikirayo jirka hablaha, dad badan ayaa sidaas ku bartay siigada, marka ay daawadeen filimada xun, sidoo kale dad badan ayaa jira naagahooda nacay marka ay filimada xumaanta barteen, waayo filimada waxa lagu dhigayo waa been waa jilitaan, naagta iyo ninka lacag bay sidaas ku qaataan, marka dadka dhalinyarada waxay moodayaan inay dadkan raaxo ku jiraan, cadaab ayay ku jiraan.
Waxaa la sheegay raga aadka u daawada filimada galmada ama sawirada jirka naagaha qaawan inay raganimadooda daciif noqonayso, taas waa dhibaatada adduunka. Dhibaatada aakhiro waa dambiga qofka uu ka helaayo filimadan xun xun, qofka wuxuu daawanayaa sino, labo qof qaawan nin iyo naag ayuu daawanayaa oo fal xun samaynaya, marka qofka arrintaas ku dhaco waxaa waajib ku ah si degdeg ah inuu uga towbad keeno.
Waa dambi faaxish ah oo aad u fool xun. Waxaa nasiib darro ah in waxaan aadka loogu faafiyay dunidda, waxaa la sheegay ilmaha yaryar inay telefoonada ku haystaan filimada xun xun oo ay isu diraan, ilmaha yaryar marka ay indhahooda ku furaan xumaantaas lagama yaabo inay wax bartaan, waayo maskaxda oo dhan waxaa ka galaya shahwada iyo kacsiga ay ka qaadayaan aflaanta ay arkeen. Waliba waxaa la ogaaday in kufsiga uu ka dhasho daawashada aflaantaas, wadamada reer galbeedka ayaana arrinkaas baaritaan ku sameeyay oo bulshadooda uu ku batay kufsiga oo sabab u ah arrintaas.
Next post Dowrka Ay Haweenaydu Kuleedahay Hagaajinta Bulshada
Previous post Waxaanu Jecel Nahay Reer Binu Israa'iil!